Trump oo canshuur dheeraad ah saaray alaabta Mexico si dhismaha derbiga loogu bixiyo | Baydhabo Online
Qorshaha ayaa lagu baaqay saacado ka dib markii madaxweynaha Mexico uu joojiyay booqasho uu ku tagi lahaa Washington, ka dib qilaaf ka dhashay cidda bixineysa qarashka derbiga xuduudda laga dhisidoono.
Donald Trump ayaa arbacadii saxiixay amarka lagu dhisayo derbiga xuddda dhanka Koofureed ee Mexico uu kala wadaago Mareykanka.
Ujeedada canshuurtaas ayaa ah in la bixiyo qorshka derbiga uu qorsheynayo madaxweyne Trump.
Mr Videgaray wuxuu sheegay in canshuurta noocaas ah ay saameyndoonto shacabka Mareykanka, ayna qaali noqondoonaan laga billaabo Qudaarta illaa qalabka gawaarida iyo waxkastaa.
Wuxuu ku celiyay in Mexico aysan bixindoonin qarashka derbiga, taas oo uu ku tilmaamay inay bahdil ku tahay qarrannimadooda.
Inay dhaqaalaha Mexico bixiso waxay ahayd mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa Trump ee xilligii ololihii doorashada.Meelaha qaar waxaa haddaba ka dhisan derbiyo kala goynaaya Mexico iyo mareykanka
Laakiin, madaxweynaha Mexico, Enrique Pena Nieto ayaa markastaa diidayay inay qarashka bixiyaan, Shalayna wuxuuba diiday inuu ka qeybgalo kulanka isbuuca soo socda ee Aqalka Cad.
“Hadda dalkeena wuxuu canshuuraa alaabta aan dhoofino, midda na loo keenana si canshuur la’aan ah ayey isaga socotaam, taas oo ah doqonnimo”, ayuu yiri afhayeenka Aqalka Cad,
Wuxuu intaas raaciyay in “Canshuurta dheeraadka ah ay si fudud u bixineyso dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga”.
Haddii taasi aysan ahayn arrinta ugu horeysa, waxay noqon lahayd midda ugu dambeyn dhacda.
Dabcan, waxaay hadda gaartay in Aqalka Cad uu sheego in madaxweyne Trump uu canshuur xad dhaaf ah saarayo alaabta Mexico ay u dhoofiso Mareykanka.
Mexico ayaa Mareykanka geyso alaab lagu qiyaasay $300 bilyan oo dollar sanadkastaa. Saameynta tallaabada Trump waxaa laga dareemidoonaa dalka oo dhan.
Asigoo hadaba ah hogaamiyaha shacabka, madaxweyne Pena Nieto, oo 18 bilood xafiiska ay uga dhiman tahay, ma haysto fursad kale oo aan ka ahayn inuu farriinta gudbiyo iyo in uusan shaqsi ahaan la kulmin Donald Trump
Ka dib markii Mr Pena Nieto uu ka baaqday kullanka, Mr Trump wuxuu sheegay in “kullanka uu noqonayo mid aan micno ku fadhin” haddii Mexico aysan Mareykanka xushmeynin, aysanna bixin qarshka derbiga.
Hadal uu TV-ga ka jeediyay, Hogaamiyaha dalka Mexico wuxuu qaranka u sheegay: “Horeyna waan u sheegay, haddana wan ku celinaayaa. Mexico ma bixin doono dhaqaalaha dhismaha derbiga”.
Wuxuu ka hadlay “musiibo” ka taagan xuduudda dhanka Koofureed ee Mareykanka uu Mexico kala wadaago. Hadalkaas wuxuu jeediyay xilligii uu saxiixayay amarka.